Dhammaan Suuqgeynta Emailka ee Sizzles-ka aysan Khasaarin | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 24, 2013 Isniin, November 22, 2021 Douglas Karr
Infograafigani ka yimid Bogagga hore, a xalka bogga soo degitaanka, waxay siisaa xoogaa aragti sare ah suuq geynta emaylka iyo tirakoobka SPAM. Fure u ah sawir-gacmeedkan waa imisa emayllada sharciga ah ayaa ku dhex jira galka qashinka. Fursaduhu waa halka ay qaar badan oo kaaga ahi ku jiraan, sidoo kale.
E-maylka ku-saleysan rukhsadda ayaa sii wadaya inuu ku hoggaamiyo xirmada heerarka guji-dhaafka ah iyo heerarka beddelka Ganacsiyo badan ayaa dadaalkooda oo dhan gelinaya istiraatiijiyado wax soo iibsi si ay u kaxeeyaan taraafiko badan oo ay iloobaan siyaabaha lagu soo qabto dadka soo booqanaya run ahaantii sameeyey ka dhig goobta. Kudar foomka rukunka si aad uqaban karto kuwa booqdayaasha ah ee xiiseynaya, uguna riix fariimaha iyaga marka ay fursadu timaado.
Markaad naqshadeyso oo aad dirto emaylladaas, ka faa'iideyso dhaqamadaan ugu wanaagsan:
Waxaan nahay kuwa raacsan Bogagga hore taasina waa isku xidhkayaga qoraalkan!
Tags: emailEmail Marketingemaylka qashinka ahgalka qashinkaspam
Hagaha Fasaxa ee Suuqgeynta Moobilada
Warqad Cad: Sidee U Fiirsashada otomaatiggu u kordhaa sicirada u beddelashada
9, 2013 at 10: 10 AM
Douglas, Maqaal xiiso leh. Adoo haysta nuxurka saxda ah, Khadadka Mawduuca Wanaagsan iyo Wicitaan Ficil oo ficil ah ayaa sameyn kara farqiga oo dhan. EMail ayaa ahaan doonta qaabka ugu jaban ee xayeysiinta.
NetGains Teknolojiyada Pvt Ltd.